Seenaa dhugaa Shimallis Abdiisaa: Shimallis Abdiisaa eenyu? - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsSeenaa dhugaa Shimallis Abdiisaa: Shimallis Abdiisaa eenyu?
Maqaa Haadha fi akaakayyuu isaa beekuu baadhuus haadhaan #Amaara ykn sanyii nafxanyaa fi abbaa Oromoo irraa #Abdiisaa nama jedhamu irraa Ginciitti dhalaatee guddaate. Abbaan isaa akkuuma namoota Oromoo biraa bara Dargii baraatee sadarkaa gadii ganda irraa kahee kantiibaa magaalatti tahee. Yeroo Kantiibaa ture kanaatti lafa Uummaataa shiraan qircaa turee. Fkn dhalootaan naannoon isaa Obboo Abdiisaan “Naannoo Waamuura” jedhaamu yoo tahuu uummaata qooduun namoota naannoo sanaaf lafa hiraa qonnaan bultoota naannoo magaalaa Giincii immoo buqqisaa ture. Haala kana keessaatti Shimallis Abdiisaa dhalaate.
Yeroo shimaallis kutaa 11 baratu abbaan isaa kantiibaa magaalaa gincii ture. Yeroo kana Shimaallis Dabbaallee abbaa isaa tahuun baraattoota Oromoo duguugsisaa ture.
Akka fkn bara 1997 gaafa Amboo jeequumsatti turte ijoollee dargaggoo kallaattii boodaatii dhufaan lama keessaa tokko kan abbaan Shimallis shugguxiin ija buruuqsee ture Shimallisiitu basaasee ture. Kanumaan yeroo finciila magaalaa finfinnee waldaa maccaaf Tuulamaas abbaan isaafii wahillaan isaa Ginciitti sabboonaa goota ilma oromoo #Caalaa_lammaa nu harkaa nyaatan.
Shimalliis bara kana keessa kutaa 12 qormaata dhabee al lama itti deebi’ee sadaffaa irratti qormaanni kutaa 12 kan dargii ni cufaame. Kana booda gara university basaasummaan ergaame. Achittis hojii tikaa adda durummaan qindeessuun baraattoota oromoo hiraarsaa ture. Namichi kun maatii basaasaa keessaatti basaasummaa hidda godhatee kan guddate unv keessaattis ilmaan oromoo duguugsisuun sadarkaa oromiyaatti tikuummaan #Abbaa_duulaatiin ajaajamuun dhiibbaa Qabsoo oromoo irraatti godhuu ol guddisuun sadarkaa ol aanaatti ol guddate.
Kan nama dhibu ammoo yeroo hojii kana hojjatuutti sadarkaa yuniversity keessatti qabxiin ni guutamaaf malee ofiif deebisee unv keessaa hin baane ture. Diinummaan isaa marsaa 2ffaa kan yunversiti keessa turee gabaabaatti yammuu kana fakkata ture.
Namtichi farra oromoo ta’e Shimallis Abdiisa kun erga yunversiti keessaa bahee hoo maal godhee ?
Akkuma yuniversiitii keessaa baheen yeroos sochiin WBO jabaan naannoo jiruutti bara 1997 gara dhumaa basaasummaan naannoo Qeellaam Wallaaggaa Aanaa Anfilloo jedhaamtuutti Abbaa Duulaa Gammadaa irraa dirqama fudhatee bobaafame. Achiin booda Uummata godina Qeellaam Wallaggaa, Dambii Doolloo, Asoosaa fi Gambeela keessa jiraatan basaasee hiisisuu fi ajjeesisuun dirqama isaa guyyuu ture.
Gara boodaa irra sadarkaan basaastummaan isaaa ol guddatee #Gataachoo #Asaaffaairraa ajaaja fudhachuun Ummata godinaalee kanaa hiraarsaa ture. Sochiin hordoffiin inni taasisu Keessa darbaa ta’ee Fardaan baadiyyaa keessa deemuun sochii WBO quba qabdu jechuun oromoota hiraarsaa ture.
Kanarraan kan kahee Waraanni Bilisummaa Oromoo yeroo sanaa hiraarsaa inni uummataarraan gahaa jiruu kana gorsee dadhabnaan, adabbii irraatti fudhatee ture. Kanaaniis, deemsa inni Anfilloo irraa gara #Garjeedaatti deemu keessaatti karaatti eeguun tarkaanfii WBOn irratti fudhateen waraanni wayaanee isa waliin deemaa turan keessaa saddeet ajjeefamuun afuur madeessee kaan hafaan qabee gorsuun gadlakkisee ture. Yeroo kanatti basaasticha #Shimaallis Abdiisaan ammoo rasaasni jalqaba baate garaa dhoosuun farsii keessaa jigsitee farda irraa gad darbuun suluula bishaan qoteetti isaa gattee turte. WBOnis gara laafummaan kanumarraa haa baratu jechuun gatanii biraa deeman. Achiin booda uumaanni Qeelleem wallaaggaa fuudhee baasuun isa yalchisee achii gara finfinne deemuun Minilik Hospital keessaatti yaalamee gad deebi’uun tika guutuu lixa Itoophiyaa tahuun Getaachoo Asaffaa jalatti muudame
Al lammaaffaa kana yeroo deebi’uu oromoota lixaa kan yaalchisanii isa fayyiisaan deebii galata isaanii inni ammoo cubbuu irratti hojjaate. Uummaata isa yaalchiise xiqqaa guddaa jaarsaa jaartii osoo hin jedhiin waliitti qabuun hiisisaa ture. Sababa isaatti dargaaggoota hedduutu biyyaa baqate. Jaarsaaf jaarti hedduutu hiraarfamaa ture. baraataa danuutu baruumsa dhabee biyyaa baqateJiruu namaa hedduutu diigaame. Erga dhukkubsatee yaalamee deebi’ee boodas shira isaa jabeessee itti fufuun qabsaahoota gameeyyii adaamsuu eegale.
Sababa kanaan nama #Shuumaa_Bazzaabiih jedhaamu waliin wal tahuun qabsaahoota gameeyyii duguuge. kanaaniis jaal Laggasaa Wagiitiin nyaate. Egaa nama farra oromoo ta’e kanatu prezedaantii oromiyaa taasifamee faarfamaa jira. Akkanaan diinummaan isaa itti fufuun uummaata lixa oromiyaa hiraarsaa ture. Asoosaatti uummatatti fincaan fincaa’aa ture. Dambii doollootti uummaata gidirsaa dhiiga barataa dhugaa ture. Erga lixa oromiyaa dhiiga boochisaa tureen booda bara 2002 keessa oromiyaatti ol guddaatee bara
lamaayyoo Atoomsaa malaanmaltummaan qabamuun hidhaamee Qalliittiitti waggaa lamaaf hidhamee ture. Achii erga baheen boodas hojii isaa itti fufee. Bara master plan keessas oromoota fi uummaattota lixa Itoophiyaa hiraarsaa ture. Egaa har’a namni kun sabboonaa jedhaamuun faarfameetu prezedaantii naannoo Oromiyaa ta’ee muudamee Oromoota mana hidhaatti guursisaa jira.
Barreeffaamni kun hinaaffaa kan hin qabnee seenaa dhugaa qorannoo walabaan qulqullaa’ee seenaadhuma Shimallis Abdiisaati. Kanaafuu namni maal akka tahee baruun salphaadha. Rakkoon yoo jiraate ykn waan ifa hin taane na gaafadhaa. Qoraannoon kun itti fufaa.